लगानीकर्ताको मनोवल घटाउँदै शेयर बजारको यस्तो रह्यो ६ दिने ओरालो यात्रा — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > लगानीकर्ताको मनोवल घटाउँदै शेयर बजारको यस्तो रह्यो ६ दिने ओरालो यात्रा
लगानीकर्ताको मनोवल घटाउँदै शेयर बजारको यस्तो रह्यो ६ दिने ओरालो यात्रा
काठमाडौं । शेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । कारोबार दिनको छैठौं दिनसम्म पनि शेयर बजारले सुधारको लय समात्न सकिरहेको छैन ।
साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार पनि नेप्से परिसूचक ५.३३ अंकले घटेर ११५७.८८ बिन्दुमा सीमित भएको छ । नेप्से सूचक घटेपनि लक्ष्मी बैंकको संस्थापक शेयर म्याचिङ्गले कारोबार रकममा भने सुधार देखिएको छ ।
बिहीबार १६८ कम्पनीको १५ लाख ५६ हजार ७९० कित्ता शेयर किनबेच भएर ३७ करोड ६१ लाख रुपैयाँको कारोबार भयो । यो बुधबारको तुलनामा ३ करोड ४२ लाख रुपैयाँले बढी हो । बुधबार ३४ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो ।
कारोबारमा आएका ११ उपसमूहका सबै सूचक ऋणात्मक देखिएका छन । निर्जीवन बीमा समुहको सूचक सबै भन्दा धेरै ३४.२५ अंकले घटेको छ । यस्तै जीवन बीमाको ३३.८६, होटल्सको २४.५३ र बाणिज्य बैंकको २.७९ अंकले घटेको छ ।
बिहीबार लक्ष्मी बैंकको संस्थापक शेयर सबै भन्दा धेरै ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यस्तै एनआईसी एशियाको ३ करोड ५४ लाख, कुमारी बैंकको २ करोड ६२ लाख, नेपाल बैंकको २ करोड २ लाख, छिमेक लघुवित्तको संस्थापक शेयर १ करोड ४९ लाख र कृषि विकास बैंकको १ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
यस दिन कालिका पावरको शेयरमूल्य सबै भन्दा धेरै ५ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्डको इकाई मूल्य र ङादी ग्रुपको शेयरमूल्य ३ प्रतिशत भन्दा बढीले सुधार भएको छ ।
बिहीबारको कारोबारबाट अरुण भ्याली हाइड्रोपावरका शेयरधनीहरुले सबै भन्दा धेरै ६.७९ प्रतिशतले गुमाएका छन । यस्तै हिमालयन उर्जाको शेयरमूल्य ६.५० प्रतिशत र नेपाल इन्स्योरेन्सको शेयरमूल्य ५.०१ प्रतिशतले घटेको छ ।
अरुण कावेली पावर, घलेम्दी हाइड्रो र पाँचथर पावरको शेयरमूल्य ४ प्रतिशत भन्दा धेरैले घटेको छ ।
२०७६ भदौ २६ गते १६:१४ मा प्रकाशित
यसकारण रोकियो प्रा.वि तहको नतिजा ! अब कहिले हुन्छ ४७ जिल्लाको सार्वजनिक ?
एनएमबि बैंकको सभाबाट ६ जना संचालकहरु निर्वाचित
धादिङमा बाम गठबन्धनको विजयी शुरुवात, क्षेत्र नं. २ प्रदेश सभा (ख) मा सिंखडा विजयी